လူငယ်၊ လူရွယ်များ နှင့် …… အင်း…မပြောတော့ဘူးဗျာ..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူငယ်၊ လူရွယ်များ နှင့် …… အင်း…မပြောတော့ဘူးဗျာ..။
လူငယ်၊ လူရွယ်များ နှင့် …… အင်း…မပြောတော့ဘူးဗျာ..။
Posted by ရာဇ၀င္လူဆိုး on Jul 19, 2012 in Creative Writing, Think Different | 18 comments
ျမန္မာျပည္ အေနအထားနဲ႔ ဆင္ျခင္နိုင္ဖို႔
“အင့်”… “ခွပ်” ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကျနော်လဲ ယိုင်သွားပြီး ဟန်ချက်မနည်းထိန်းလိုက်ရပါတယ်။ စကားပြောလက်စ ကျနော်ဖုန်းကတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာ ။ “ဟာ..ဆောရီး အကိုရာ ဆောရီး” ။ကောင်လေးကအတင်းတောင်းပန်ရင်း ကျနော်ကိုတော်တော် အားနာနေပုံပါ။ တောင်းပန်တာက ကောင်လေး တိုက်လိုက်တာက ကောင်မလေး။ တစ်မျိုးပါပဲလား။ သူငယ်မကတော့ မတောင်းပန်တဲ့အပြင် ဂျိုကြည့် ကြည့်ပြီး ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့ထွက်သွားပါကရောလား။ ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းဆေးခန်းလာပြတဲ့ လူနာတွေဆိုတော့ “အိုကေ ညီလေး ရတယ် ” ပြောပြီး သူငယ်ချင်းရှိရာ ဆေးခန်းတွင်းသို့ ဝင်လိုက်ပါ၏။ စိတ်ထဲမှာတော့ တင်းနေတာ မိုးလင်းကတည်းက..။
“ဟ..ငါ့ကောင်လူဆိုး ပျောက်ချက်သာားကောင်းလှချည်လား။ မျက်စိလည်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော ”
“အေးမင်းဆီလာရတာလဲ ဗေဒင်တွေထဲက ပြသာဒါးပဲ..။ ကားပျက်လို့ ဝပ်ရှော့ထိုးပြီး မင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာပါတယ် အဝင်ဝမှာတင် ဟိုလူနာ
၂ ယောက်တိုက်လို့ ဖုန်းကပြောနေရင်းနဲ့ အောက်ကျသွားရော..”
“စိတ်လျှော့ပါကွာ သူတို့မှာလဲ သူတို့ အပူနဲ့ဆိုတော့ မင်းရပ်နေတာ သတိမထားမိတာထင်တယ်… စိ်တ်ကို နည်းနည်းလေးလျော့”
“အေး..နေစမ်းပါဦး..။ သူတို့အရွယ်ကြည့်ရတာ ကျောင်သားအရွယ်တွေ ပညာကိုအေးအေးဆေးဆေး သင်နေကြရမှာကို ဘာတွေများ အဲဒီလောက်
အပူတွေကြီနေနရတာလဲဟ..ပြောရင်း တင်းလာပြီ။ ဘာအပူပဲရှိရှိကွာ လူတစ်ယောက်လုံးရပ်ပြီး ဖုန်းပြောနေတာကို
မမြင်ပဲဝင်တိုက်တာတော့ တော်တော်ဆိုးတယ်။ ဝင်တိုက်တဲ့ ကောင်မလေးက တောင်းပန်စကားတောင် မပြောနိုင်တော့ တော်တော်ကြီးတဲ့
” မင်း…အဲဒါကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်နေတာ မဆန်းဘူးလို့ ..။ မင်းစဉ်းစားကြည့် ..ငါက OG လေးကွာ မင်းလဲသိတာပဲ..ငါ့ဆီကို ဒီအရွယ်တွေ
လာပါတယ်ဆိုမှာတော့..။ မင်းကိုဝင်တိုက်ရလောက်အောင် ကြီးနေတဲ့အပူက ပြောရရင် ဗိုက်ပူတာဟေ့..ဗိုက်ဗိုက်…..
“ဪ” ….လို့ တစ်ခွန်း့ပဲ ကျနော် သူငယ်ချင်းကိုတုံ့ပြန်မိပါတယ်။
“ဒါနဲ့ မင်း သူတို့ကို ဘာပြောပြီး ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲ ” ကျနော် စကားဆက်မေးမိလိုက်၏။
” ငါသူတို့ကို လက်ထပ်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်တယ် သူငယ်ချင်း။ မင်းစဉ်းစားကြည့် လူဆိုးရာ .. သူတို့အရွယ်လေးတွေက ၁၈၊ ၁၉ ထက်မပိုပါဘူး
လွန်ရော ၂ဝ ပေါ့ကွာ။ အေး..အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လက်ထပ်ဖို့၊ အိမ်ထောင်သားမွေး ပြုရမယ်အရွယ်ထက် နဲနဲ စောနေသေးသလိုပဲ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုပညာရှာနေတဲ့ အရွယ်၊ ကျောင်းသားပဲ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးကို စနစ်တကျ
ထိန်းသိမ်းဖို့ stable ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား..။ မိဘာတွေ ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တော့ စီပွားရေး စိတ်အေးရတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဘဝအတွေ့အကြုံ
မပြည့်စုံသေးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှု၊ စာနာမှု၊ ခွင့်လွတ်မှု ဆိုတာတွေ မတည်ဆောက်တတ်သေးတော့ အိမ်ထောင်ရေးက
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ရေးပြသာနာတွေကိုမထိန်းတတ်ဘူးလို့ ယျေဘူယတွေ့ရတယ်။ ကြီးတဲ့အမှု ငယ်အောင် ၊ ငယ်တဲ့အမှု ပပျေက်အောင်
မထိန်းတတ်ကြတာပေါ့။ ငါ့မျက်စိရှေ့မှာလဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်သည်တွေထက် ၂၅ နှစ်နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်သည်တွေက ပိုပြီး
အေးချမ်းတည်ငြိမ်တည်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ရတာများတယ် (အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးနော် )။ အဲ..အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုရဲ့
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ မွေးလာတဲ့ သားသမီးတွေမှာ သက်ရောက်မမှုရှိလာလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတော့ မွေးလာတဲ့ သားသမီး
တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နဲ့ အနာဂတ်ကို ကောင်းကောင်းမပျိုးထောင်သလို၊ တစ်ချို့ကလေးတွေဆို စိတ်ဒါဏ်ရာတွေရမယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့
တွေဆိုရင် ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ကျောင်းထွက်ရမယ်၊ နိုင်ငံမှာလဲ ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးတွေများလာသလို ကလေးလုပ်သားတွေလဲ တိုးပွားလာလိမ့်မယ်။
” ဟေ ..ဒါတွေကို မင်းစဉ်းစားမိတာတောင် မင်းက သူတို့ကို လက်ထပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသေး….” ကျနော် စကားမဆုံးသေးပါ…….
” မင်းထင်သလို မဟုတ်သေးဘူး လူဆိုးရ.. ငါတို့မှာလဲ နီးရာဓါး ကြောက်ရသေးတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်လိုက်ရလို့ဖြစ်လာမယ့်
ဘေးအန္တရာယ်က လူ့အသက်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်ကွ။ ပိုပြိးတော့ လောလောဆယ် အန္တရာယ်များတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ၊အသက်အန္တရယ်၊
ရှင်သန်ရပ်တည်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေနဲ့ပါ ပတ်သတ်နေတယ်။ အခု စုံတွဲက ဆေးပညာအမြင်၊ ဗဟုသုတလေးရှိလို့ ငါတို့ဆီကို
ရောက်လာကြပေမယ့် တစ်ချို့က ရှက်လို့တဲ့ ။ဆေးခန်းမလာကြဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက လက်သည်ဆိုတာတွေနဲ့ ဖြစ်သလိုလုပ်ကြတော့
အသက်တွေဆုံး၊ ဘဝတွေဆုံး အရာရာတိုင်းသော ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တဲ့ သူတွေ ဒု နဲ့ ဒေး ပါ။ တောရွာဘက်တွေဆို
အဆိုးဆုံးပဲ။ ဖြစ်သလိုလုပ်ကြတော့ အသက်တွေဆုံး ၊ ဘဝတွေဆုံး တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်သလို ဖြစ်လဲဖြစ်နေကြတယ် သူငယ်ချင်း….။
” မင်းဒါတွေကိုတွေးမိရက်နဲ့ အခုငါတွေ့ခဲ့တဲ့ အတွဲကို လက်ထပ်နိုင်ဖို့ ကြိုုးစားပါလို့ မင်းပြောလိုက်တာကရော” ကျနော့် စကားပင်မဆုံးလိုက်ပါ…..
” သူတို့ချင်း ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ ဖြစ်တာပဲကွာ။ ခုဆိုလဲ မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ဆိုတော့ ယူလိုက်ကြတယ်ပဲထား…အိမ်ထောင်သက်တမ်းလေးကြာလာရင်
သူ့အလိုလို ဘဝအတွေ့အကြုံတွေရလာလိ်မ့်မယ်။ ရန်ဖြစ်ရင်တောင် လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား ပေါ့ကွာ။ စကားပုံတောင်ရှိသေး။ ဒီလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့
အိမ်ထောင်ကို ထိန်းသိမ်းတတ်၊ ဦးဆောင်တတ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ခုလို လက်တွေ့ကြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကနေ သူတို့ရော၊
ငါရော ရှောင်လွဲလို့ရသလို ချစ်တဲ့သူချင်း ပေါင်းရအောင် တိုက်တွန်းပေးတဲ့ ငါလဲ ကုသိုလ် ရတာပေါ့ကွ..ဟားဟားဟား…
” အေး ..ဒီနေ့ ရက်ရာဇာကွ ” ကျနော်စကားမစပ် ပြောလိုက်မိ၏။
” ဟေ..ဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲ လူဆိုးရာ..။ ခုပဲ ပြသာဒါး၊ ခုပဲ ရက်ရာဇာဖြစ်သွားပြန်ပြီ”
” ကျေးဇူး..ငါ ကုန်ကြမ်းတစ်ခုရ သွားလို့ကွ…ဟဲဟဲ ။ ငါ ကားပြီးပြီလား ဝပ်ရှော့ ကို လစ်လိုက်ဦးမယ် ..မနက်ဖြန် ဖုန်းဆက်လိုက်
ဆေးခန်းကထွက်လာကတည်းက ကျနော်တွေးရင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်လာမိတယ်…..့……………………………………
+++ကျနော်တို့ အဖိုးတွေ၊ အဖွားတွေ ခေတ်က ၃ နှစ် ၃ မိုး လေ့လာပြီးမှ အဖြေပေး၊ ငွေစု၊ လက်ထပ်၊ အတူနေကြ……။
+++ကျနော်တို့ အဖေတွေ၊ အမေတွေ ခေတ်က အဖြေလေးရဖို့ ၁ နှစ်လောက်အကဲခတ်ပြီးမှ အဖြေပေး၊ လက်ကလေးကိုင်ခွင့်ရဖို့ ၆ လ လောက်စောင့်ရ၊
ပြီးရင်ငွေစုလိုက်ဦး..။ အားလုံးပြည့်စုံမှ လက်ထပ်၊ အတူနေကြတယ်။
ကျနော့် ကားအစုတ်ကို အင်ဂျင်စမ် နိုးနေသံကြားမှပဲ ကားဝပ်ရှော့ကိုရောက်တာ သိလိုက်ရပြီး ကျနော့် အတွေးစ ပြတ်တောက်သွားပါ၏။
” မင်း အဲဒါကြောင့် လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ ငါ့ကောင်ရ..။
အခုခေတ် ယောက်ျားလေးတွေ ချာတိတ်တွေ ရဲ ့ဘေးအနီးအနားမှာ ဟိုဇါတ်လမ်းရုပ်ရှင်တွေ ၊ ဟိုစာအုပ် တွေ ၊ ပလူပျံနေအောင် မမြင်ချင်မသိချင်မကြားချင်မှ အဆုံး ရှိနေကြတော့ ၊ ဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်သင့်တာ ကို မဝေဖန်မပိုင်းခြား (ငယ်သေးတာလဲပါမှာပေါ့) တော့ဘဲ ဆန္ဒတွေ ရမက်တွေ ရှေ ့တန်းတင်ပြီး ထင်ရာစိုင်းကြတာကလား ။ မိန်းခလေးခဗျာလဲ… ထို ့အတူ အပြင် ၊ အခု ရုပ်သံလိုင်းတွေက ပြနေတဲ့ ကိုရီးယားကားတွေရဲ ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကလဲ တော်တော်ဆိုးတာကိုး ။
လင်ခိုးမယားခိုးကြာကူလီ ကိုရီးယားကားတွေ ရဲ ့နောက်ဆက်တွဲမှာ အသက်ကြီးပိုင်းတွေလဲ ပါမယ် ထင်ပါရဲ ့ဗျာ ။
ကိုရာဇဝင်လူဆိုးကလဲ မန်းတလေးဂေဇက်မှာ အပျိုကြီးတွေ ပေါတယ်ဆိုတာနဲ့၊ ဇွတ်ကို ကြေငြာတော့တာပါလား… ။ ဟီဟိ
အာ..ဟိ…။ ကိုပေကလဲ ဒဲ့တွေလွတ်နေတော့ ..အဲ ကျော်လဲ .ပြောစရာစကားကို မရှိတော့ဘူး..အမှန်တွေကို ထပ်ဖြည့်ပေးလို့ ကျေးဇူး ကိုပေ..။
လူပျိုကြီး ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာနေပြန်ပါဗျီ …
ဟောဒီက တိုတိုလူချိုးက လူပြို .. အဲ .. လူပျိုဂျီးတဲ့ခည ..
ဖတ်ရှု အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကျနော်တို့ အရွယ်ကတော့ အဲ့ဒီလို အရွယ်ကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပါပြီလို့ …
ကိုယ့်ရဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ်လေးတွေကို
အဲ့ဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် ထိန်းသိမ်းရတော့မှာပဲလို့ ပြောကြားရင်း …..
ရေကူးကန်လို လူမြင်ကွင်း နေရာမျိုးတောင် မနေရဘူး၊
ကျောင်သူ ကျောင်းသား အရွယ်တွေ တွေ.နေရတယ်၊
ယောက်ျားလေးတွေက ထားတော.၊ မိန်းကလေးတွေကိုက မရှက်ကြတော.ဘူး။
စာလုပ် အားကစားလုပ်ရမှာ လမ်းကြောင်းတွေ မှားနေကြတယ်၊
အားကစားလာလုပ်နေတဲ. လူတွေကို ကြည်.ပြီး ရှက်ရကောင်းမှန်းလဲ မသိဘူး၊
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြလဲ …..
“ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ မွေးလာတဲ့ သားသမီးတွေမှာ သက်ရောက်မမှုရှိလာလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတော့ မွေးလာတဲ့
သားသမီး တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နဲ့ အနာဂတ်ကို ကောင်းကောင်းမပျိုးထောင်သလို၊ တစ်ချို့ကလေးတွေဆို စိတ်ဒါဏ်ရာတွေရမယ်၊
တွေဆိုရင် ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ကျောင်းထွက်ရမယ်၊ နိုင်ငံမှာလဲ ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးတွေများလာသလို ကလေးလုပ်သားတွေလဲ
….. ဒီစာကြောင်းလေးတွေကရင်ကိုလာထိတယ်ဗျာ …..
ကိုမင်းလတ်နဲ့ ရာဇဝင်လူဆိုးရေ .. ဒီစာကြောင်လေးက ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့် ….. တကယ်တမ်းတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါသေးတယ် …. ဆိုလိုတာကလေ …. ဘယ်လို မိဘမျိုးကပဲ ပေါက်ဖွားခဲ့ပေါက်ဖွားခဲ့ပါ …. ကိုယ့်ဘဝကိုယ်မြင့်တင်လိုစိတ်ရှိမယ်ဆိုလျှင် ၊ သူ့အတွက်နေရာတနေရာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတပါ … ။
ဘိုအံကြီးရေ..ကြော်ငြာတာကတော့ ကိုဂီ ပို့စ်တွေဖတ်ပြီး Marketing ကိုဖောက်ထွက်ကြည့်တာ(တရားခံရှာတာ..)။ သူကြီးတို့ရွာ အမေကြီးကားထိ မရောက်ဖူးပေမယ့် ကျနော်ရောက်ဖူးသမျရွာတွေမှာတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေက တကယ်ကိုမထူးဆန်းတော့တာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ (ထပ်ပြောရရင်) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆေးပညာ ဗဟုတုတ၊ ကျန်းမာရေးအသိအမြင်တွေ ဒီထက်ပိုပြီးရှိမှသာလျှင် ဒီလိုခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကို လူငယ်တွေ ဆင်နွှဲသင့်ပါကြောင်း…….မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ငရဲအကြီးခံပြီး ..ရေးလိုက်ရပါကြောင်း….
….ဘဝဆက်တိုင်း လူပျိုကြီး ဖြစ်မယ့်….
ဝင်ရောက်… ဖတ်ရှု… အားပေး…. နှစ်သက်….. သဘောကျ…..သွားပါဂျောင်း……
ကိုမင်းလတ်ရေ… အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ…။ ကျနော်တို့ လမ်းဘေးမှာ ပလတ်စတစ်ကောက်နေတဲ့၊ တောင်းစားနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မွေးကတည်းက စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေနေရာကနေတွေးကြည့်ရင် သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေဆိုးမျိုး ကြုံရတာလဲ…ကျောင်းနေရမယ်အရွယ်မှာ ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဒီကလေးတွေ မရှိတာ ဘာကြောင့်လဲ…ဘာကြောင့်ရောသူတို့ကျောင်းမနေရတာလဲ..?????
…. မိဘတွေဆင်းရဲလို့ …….တဲ့ ( တကယ်လဲ ဟုတ်တယ် )
….အဲံ..သူမိဘတွေ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲတာလဲ..ပညာမတတ်လို့ ( ပညာတတ်တိုင်း ချမ်းသာမှာလားမေးတော့..ကျနော်ကတော့ နိုးလို့ဖြေမယ် ။ အတန်းပညာမတတ်ရင်တာင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတစ်ခုခု တတ်ထားရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် စီးပွားရှာလို့ရသလို ဒီအတတ်ပညာကိုလဲ သားသမီးကို ကျောင်းမထားနိုင်ရင်တောင် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး အသက်မွေးခိုင်းလို့ရတယ်။ ( ဒါက ပညာရေး)
….တစ်ချို့ကျတော့ မိဘတွေ မရှိလို့ ဒီလိုလုပ်နေရတာပါ လို့ပြောတယ်။
တစ်ချို့က မိဘ ၂ ပါးလုံး တကယ်ကို ဆုံးသွားလို့ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်တာ..
…အဲ..စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေကျတော့ရော… ..ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ထဲကလို ပြသာနာတွေကြောင့်လို့ ထင်မိတယ်( ကျနော်အမြင်ပေါ့) ။ မိဘလုပ်သူက ရှက်တာ နေရာလွဲ နေတာလား အခြေအနေမလေးတာပဲလား ..(နားလည်ပေးလိုက်ပါ)
ဒီလို ကလေးတွေကျတော့ လူကောင်း သူကောင်းက မွေးစားရင်တော်ရဲ့ ဈေးရောင်းခိုင်း၊ တောင်းစားခိုင်း၊
သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ ငွေမရရင် ထမင်းမကျွေးတဲ့ သူတွေလက်ထဲရောက်ရင် ကျနော်တို့ ဘယ်နှယ်လုပ်ရပါ့။
(ကျနော်ကိုယ်တိုင် အထက်ပါ ကလေးတွေကို အင်တာဗျူးဖူးတယ်….တကယ်)…………
ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုတော့ …။ ကျနော်တို့က အချိန်တန်ရင် သေကြမှာပဲလေ..။ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်…နောင်တစ်ချိန် ဒီကလေးတွေ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြမလဲ တွေးကြည့်ရင်တာ့ ကျောချမ်းစရာ။ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ နောင်တစ်ချိန် ဒီလိုလူတွေ များလာခဲ့ရင်ရောဗျာ… တကယ်ပါ….
ဆြာဇောက်ရေ..တရား သဘောလေးနဲ့ ပြောပြပေးပါဦး…ကျေးှဇူးပါဗျား….။
ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ .. ဘာလုပ်ပေးနိုင်ကြမှာလဲ … ဒီ post ကိုဖတ်တဲ့သူတွေ ထဲမှာ လူငယ်တွေပါမယ်. အဲဒီတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကိုရှောင် နိုင်ဖို့
လူငယ်ဆိုတာ မလုပ်ဖူးတဲ့ အလုပ်ကို စမ်းချင်ကြတယ်.. ဘဝကို ခဏနဲ့ လဲချင်ကြတယ်.. ဒီအချိန် ဒီအရွယ်အတွက် ဒီဆုံးဖြတ်ဟာ သူတို့ အတွက်တော့ သူရဲကောင်း ဆန် နေလိမ့်မယ်.. ဒီနေရာကို ပိတ်ထားရင် နောက်နေရာက ထွက်သွားလိမ့်မယ်..
ဖြစ်ပြီးသွားပြီ.. ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေ.. ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာတော့မှ ဘေးထိုင်ပြီး ဝေဖန်မှာလား.. ဝေဖန် အပြစ်ပြော တာကြောင့် ရနိုင်တာက နောင်တပဲရှိတယ်.. အပြစ်တွေပြောပြ လို့ ကော..ဘယ်လောက် ပူတယ်ပြောပြော မီးဆိုတာ ကိုင်ဖူးတဲ့သူအတွက်ပဲ ပူမှန်းသိတယ်..
ဘယ်လိုဘယ်ပုံကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာကို ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်၊ ဆေးပညာရှုထောင့်က ပညာပေးပြီး ကာကွယ်ထားမှရမယ်.. အားပေး သင့်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ့် ဘဝ အတွက် တော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်..
ရာဇဝင်လူဆိုး ကိုမေးပါ။ သူကလူပျိုကြီးဆိုတော့ ပိုသိလိမ့်မယ်.. ဟီး
လူငယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးက အရွယ်ရောက်ရင် စွန့်စားချင်ကြ၊ မြင့်မြင့် ပျံလိုကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဆြာအုပ်ပြောတဲ့
တားဆီးမှာလား၊ အပြစ်တွေပြောနေကြမှာလား၊ ကာကွယ်ကြမှာလား ဆိုတဲ့ နည်း ၃ ခုမှာ…
….တားဆီးရင် တော့ လူငယ်တွေ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထပ်ပြီး ဖောက်ထွက်ကြမှာ သေချာတယ်
( တိုင်းပြည်အရေးသာ ဖောက်ထွက်ဖို့ သိပ်မတွေးနိုင်ကာမှ ရှိရော ..)
….ဖြစ်ပြီးသားကို ပြန်အပြစ်တွေတင်တာကတော့ တော်တော်ကို မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်..။
(သင်ခန်းစာယူခိုင်းပြီး နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ခိုင်းဖို့ပဲ ရှိပါတယ် )
…. ကျနော်တို့ လုပ်ပေး၊ လုပ်နိုင်တာကတော့ ဆေးပညာ ဗဟုသုတတွေ၊ ကျန်းမာရေး အသိအမြင်တွေ
တိုးပွားလာစေဖို့ ပညာပေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးနိုင်မယ်။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သေချာ လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့….
မိခင်နဲ့ ကလေး သေဆုံးနှုံးတွေ ကျလာမယ်။ တခြား လူမှုရေး ပြသာနာတွေ လျော့ကျလာစေ မလားလို့..
ရာဇဝင်လူဆိုးရေ … မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ်တွေ ကြားမှာ ယနေ့ထက်တိုင် ကြုံတွေ့နေရစဲ အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေပေါ့ … ။
ပညာပေးလုပ်မယ် ပြဌာန်းကြည့် မိဘဖြစ်သူတွေ ဝိုင်းကန့်ကွယ်မယ် .. ဒီပညာပေးကြောင့် အဲ့ဒီ နားမလည်တဲ့ အရာတွေကို ဟိုက်လိုက်လုပ်သလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရယ် ၊ ငါ့သားသမီး ငယ်သေးတယ် ဒါတွေ မသိသင့်သေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရယ်ပေါ့လေ … ။
တကယ်တမ်းတော့ .. ဒန့်ကျွဲပင် ပုခက်ဆင်တဲ့ အချိန်မျိုးရောက်လာတော့မယ်ထင်တယ် … ။
မိဘတွေက မသိသင့်သေးဘူးထင်တဲ့ အရွယ်တွေက .. သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်း နဲ့ အင်တာနက်ထဲက အတွေ့ ကြုံတွေအရ ဒီကိစ္စတွေမှာ စိတ်ဝင်စားနေကြတာမျိုး ၊ တားဆီးမရတာမျိုး ၊ လက်တည့်စမ်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာကြပြီ … ။
အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ပညာပေးမယ်ဆိုလျှင် .. မမှီတော့ဘူးလေ .. ။
လက်သည်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ … အစိုးရက ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်မဖြေရှင်နိုင်သေးတာ ဝမ်းနည်း ဖွယ်ရာတွေ့မြင်ရပါတယ် ဒါ့ပြင် ဆေးဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေတာတွေ ၊ ဆေးတိုက်တာတွေ ၊ ဟိုဒင်းနဲ့ အရက်နဲ့ရောပြီးတိုက်တာတွေ … ရဲတင်းစွာ လုပ်နေကြတယ် .. တားဆီးလို့ မရသေးဘူးပဲ … ။ လက်သည်တွေသုံးတဲ့ နည်းအချို့က .. ဘယ်လိုမှ လူဖြိန်းတွေးတောင် လက်မခံနိုင်တဲ့ လုပ်ရက်မျိုးမို့ … ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူပါ အသက်အန္တရာယ်ရှိမယ့် အနေထားမျိုးပါ …. ။
ပြောသင့် မပြောသင့် စဉ်းစားရင်း နဲနဲပြောချင်တယ်။ Abortion ကိတ်စကို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး တရားဝင်လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် ကြားဖူးတယ်။ ဒီမှာတော့ လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့လူကတပိုင်း ကိုယ့်ကိတ်စရှင်းဖို့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အသေခံမဲ့လူက တပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ လက်သည်တွေကို အပြတ်ရှင်းဖို့မနိုင်ရင် ဟိုကိတ်စ တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်၊ ၂ခုလုံးမဖြစ်နိုင်ရင် ပညာပေးဆိုတဲ့ ကိတ်စကို ဆယ်ကျော်သက်တွေ တားဂတ်ထားပြီးလုပ်ဖို့ဘဲရှိတော့တယ်။
“အင့်”… “ခွပ်” ဆိုလို့ ငါတို့ လူဆိုးကြီး ဒီတစ်ခါတော့ အထိုးခံလိုက်ရပြီလို့ထင်လိုက်တာ တော်သေး တာပေါ့မဟုတ်လို့။
ဒီကိစ္စမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ကြလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ မရှောင်နိုင်ရင် ကတော့ကာကွယ်ထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ တာဝန်ပိုရှိမယ်ထင်တယ်။ ထင်တိုင်းကျဲထားပြီးရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုသိရမှာပေါ့။ အဲ့တော့ ကိုယ်ကဦးဆောင်ပြီး ဒီလိုမဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားပေါ့။ ငါသာဆရာဝန်ဆို အဲ့ကောင် နားရင်းကိုရိုက်ပစ်လိုက်တယ် :-) ဘာမှမသိတဲ့ လူအသက်တစ်ချောင်းကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ့်လုပ်ရပ်ကိုတော့ရှုတ်ချတယ်ဗျာ။
“ငါက OG လေးကွာ မင်းလဲသိတာပဲ..ငါ့ဆီကို ဒီအရွယ်တွေ
လာပါတယ်ဆိုမှာတော့..။ မင်းကိုဝင်တိုက်ရလောက်အောင် ကြီးနေတဲ့အပူက ပြောရရင် ဗိုက်ပူတာဟေ့..ဗိုက်ဗိုက် ”
ဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် လူနာရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကလျှို့ဝှက်ချက် ဆို …..
……ဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် လူနာရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကလျှို့ဝှက်ချက် ဆို …..
မှန်လိုက်လေ ကိုယ့်ဆရာရယ်… ပို့စ် စရေးနေကတည်းက ဒီအချက်ကတော့ ထောက်ပြစရာဖြစ်နေမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ..။ တကယ်လဲ ဆရာဝန်ဆိုတာ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဘယ်လိုမှ အပြင်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ အခွင့်မရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် သူ့ဆေးခန်းမှာ လာသမျှ လူနာတော်တော်များများက အမျိုးသမီးကိစ္စတွေချည်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ သားပျက်သာလျှောက အစ..တားဆေးထိုးတာ အဆုံး အကုန်လုပ်ပေးရပါတယ်..။ ဒီအကြောင်းတွေ သိထားတော့ သူမပြောတောင် ကျနော်ကတော့ အလိုလိုပေါက်နေပြီးသားဖြစ်တာရယ်။ စုံတွဲလေးက ငယ်လွန်းလို့ ကျနော်တို့ နစ်ယောက် ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပြောရင်း စကားစပ်မိသွားတာပါ..။ ပို့စ်လဲအရမ်းရှည်ပြီး လိုရင်းမရောက်မှာစိုးရယ်..နဲနဲလေး ဟာသရသ လိုလေးဖြစ်သွားအောင် တိုတိုလေး တုတ်လိုက်ရပါ၏ ။:P
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်တရားဝင်ဖျက်ချပေးခြင်းကို ဗုဒ္ဓအယူဆ ဘာသာရေး ရှူထောင့်နဲ့ ကြည့်ပြီး လက်မခံကြတာရယ် ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ပညာပေး ဗဟုသုတထိရောက်စွာ လုပ်မပေးနိုင်တာတွေရယ်ကြောင့် အခုလို ဖြစ်တော့မှ ဖျက်ချတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ ။
လက်သည်က တရားမဝင်တွေ လုပ်လုပ်ပေးနေတာ ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးမပေးနိုင်လို့ မကြောက်လို့ လုပ်စားနေကြတာပါ ။
သားအိမ်ထဲကို ကတ်ကြေးနဲ့မွှေဖြတ်တောက်တဲ့ စိတ်ရူးဆန်ဆန် လုပ်ရပ်တွေလည်း လက်သည်တွေ အညှာတာမရှိလုပ်ကြပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တရားဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေ အမျိုးမျိုး ခွဲပြီး ချမှတ်ထားပေမယ့် ၊ ပြသနာမဖြစ်ခင်တော့ ဘာပြစ်ဒဏ်မှ မခံရဘူးပေါ့ ။ ပြသနာတက်ပြီး သေတော့မှ ဇစ်မြစ်လိုက်တဲ့အခါမှသာ အပြစ်ပေးတာမျိုးကြောင့် ၊ ဒီလုပ်ငန်းတွေ အခကြေးငွေယူပြီး ပေါ်တင်တောင်လုပ်ကိုင်နေကြတယ် ။